चितवनको कालिका ५ पदमपुरमा धनधान्याञ्चल सप्ताह हुने, २ करोड रकम संकलन गर्ने लक्ष्य - Enepalese.com
चितवनको कालिका ५ पदमपुरमा धनधान्याञ्चल सप्ताह हुने, २ करोड रकम संकलन गर्ने लक्ष्य
इनेप्लिज २०७४ फागुन १ गते ११:३८ मा प्रकाशित
पदमपुर, चितवन, १ फागुन ।
चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नं. ५ पदमपुरमा यहि फागुन १३ गतेबाट श्रीमद् भागवत धनधान्याञ्चल सप्ताह ज्ञान–महायज्ञ हुने भएको छ । जिल्लाकै पौराणिक देवताको रुपमा रहेको भिमवली मन्दिर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सो महायज्ञ गर्न लागिएको मूल समारोह समितिका संयोजक नन्द प्रसाद भट्टराईले बताए ।
महायज्ञबाट २ करोड रकम संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । संकलित रकमबाट मन्दिरको अतिरिक्त विवाह, ब्रतबन्ध मण्डप, धार्मिक पुस्तकालय, आध्यात्मिक योग भवन, थारु संग्रहालय र बाल उद्यान समेत निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । सोही रकमबाट यस क्षेत्रका विपन्न बोटे, दलित, चेपाङ छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति समेत प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको संयोजक भट्टराईले बताए । फागुन २० गतेसम्म संचालन हुने महायज्ञमा वाचन प्रविण पण्डित दिनबन्धु पोख्रेलबाट श्रीमदभागवत कथा वाचन गरिने आयोजकले जनाएका छन् । सो मन्दिरको १३ कठ्ठा क्षेत्रफल रहेको छ । सो परिसरमा शिवालय मन्दिर, दुर्गा, ब्रह्मास्थान, गढीमाईको समेत मन्दिर रहेको छ ।
मूल समारोह समितिद्वारा आज मंगलबार मन्दिर निर्माण स्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कालिका नगरपालिकाको उपमेयर कमला भट्टराईले पदमपुरवासीको आस्थाको धरोहर भिमवली मन्दिरका अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक कार्यको लागि सबैको साथ र सहयोग रहेको बताईन् ।
महायज्ञमा स्थानीय, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका धर्मानुरागीले सहयोग गर्ने वचनवद्धता प्राप्त भएको प्रचारप्रसार समितिका संयोजक विष्णु सिंखडाले बताए । सहयोगीदाताहरुलाई कार्यक्रम स्थलमा नै सम्मान गर्ने समेत उनले बताए । मूल समारोह समितिका संयोजक नन्द प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष जियन महतो, सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक ऋषब देव भट्टराई लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा मन्दिर निर्माण समितिका सचिव शिव प्रसाद सापकोटाले नवनिर्मित मन्दिरहरुको आय व्यय विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।